Unreal Injini 4.27: nyowani vhezheni yegrafiti injini yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Unreal Injini 4.27: Iyo injini yeinjiniya ine nhau dzeLinux yatove kunze
Kusvika Shamisa Engine 4.27, iyo nyowani vhezheni ine simba giraidhi injini iyo yakawanda kwazvo mitambo yemavhidhiyo kubva kuEpic Games uye nevamwe yakavakirwa. Kunyangwe izvozvi kambani iri kutoshanda pachizvarwa chitsva (Unreal Injini 5), kana ichokwadi kuti bazi rechina richine zvakawanda zvekutaura, uye zvimwe izvozvi neichi chitsva chiitiko.
Neichi kusunungurwa kutsva, Unreal Injini ichasanganisira akawanda akakosha ekuvandudza, uye ivo vanouyawo kune iyo Linux vhezheni, iri yakanaka kwazvo. Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira kubatanidzwa kweOodle Compression Suite uye iyo Bink Vieo codec inosanganisirwa munharaunda. Uye ndiko kuti kuwanikwa kweRAD Game Zvishandiso neEpic Mitambo kwakaita kuti kusangana kwakadaro kuitike.
Izvo zvinouyawo nekuwanda kwekuvandudza kweiyo chaiyo chaiyo, yakawedzera chokwadi uye yakavhenganiswa chokwadi, uye OpenXR. Uye kana izvo zvichinzwika kupenga kwauri, mirira kusvikira iwe waona kuwanda kwakawanda kwakabatanidzwa muUnreal Injini 4.27:
Yekutanga rutsigiro rweLinux nDisplay nemidziyo yayo.
Pixel kudhinda kunyorera kunogona kuendeswa neLinux server zviitiko.
Pixel kutenderera zvino kwatsigirwa neiyo AMD Yepamberi Media Sisitimu yemahara codec.
Linux SDK yakavakirwa pa v18 clang-11.0.1 (CentOS 7).
Media Framework yakagadziridzwa nerutsigiro rwayo rweLinux uye AVEncoder yeLinux neWindows neNVENC uye AMF.
Injini yeWebRTC yakagadziridzwa kuita vhezheni M84.
Injini Opus vhezheni yakagadziridzwa kuita 1.3.1-12.
Yakaendeswa kuLLVM 11.0.1.
Kana uchirodha maraibhurari kubva kuUnix-senge system, ichaongororawo nzira yepasirese.
Wakawedzera Android rutsigiro.
Inowedzera OpenXR Linux rutsigiro.
Kuwanda kwetsikidzi dzaive mushanduro dzakapfuura uye tsaona mune mamwe mashandisirwo akagadziriswawo, mamwe acho akanganisawo vhezheni yeLinux.
Linux yeAArch64 (ARM) ikozvino inobvumidzwa kuumbiridza uye kurongedza zvakare.
Mamwe mashoko - Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Unreal Injini 4.27: Iyo injini yeinjiniya ine nhau dzeLinux yatove kunze
Iwo manzwiro akasanganiswa zvakanyanya, kune rumwe rutivi ndinofara kuti inovandudza rutsigiro rweLinux muinjini yayo yemifananidzo, kune rumwe rutivi inoenda uye kuti vanoipa, ini ndaigona kuishandisa kuita kuti mitambo yako ishande natively.
mmmmm, iwe unoziva kupi kurodha pasi nekumisikidza mu ubuntu 20.4?, nekuti kana munhu akaenda kune iyo peji, zvinoita kuti utore Epic Games starter inozivikanwa, havazeze ku linux. iyo data inokosheswa.
Iyo itsva vhezheni yeWhonix 16 yakatoburitswa uye inouya zvichibva paDebian 11